Dagaal daaqadaha ... Goobta, Goobta, Goobta | Martech Zone
Dagaallada Daaqadda… Goobta, Goobta, Goobta
Khamiista, Sebtember 14, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Kani waa sawirka Magaalada Qiimaha leh ee ku taal US31 South oo u dhow halka aan ku noolahay Greenwood. Ogow khaanadda qodeysa… daaqado ma leh, midab xun, dhammaan leben la taaban karo… oo aan rafcaan weyn lahayn. Waxaan ka raali gelinayaa sawirada, taleefankayga waa ka maqan yihiin.
Taasi waa, ilaa Ashley's Furniture ay u soo guurtay dhinaca wadada. Meel aad u fiican - waxay ahaan jirtay dukaan isboorti. Ashley's waxay leedahay qiimayaal aad u wanaagsan dukaankuna waa mid layaableh… oo ay kujiraan qalabka loo yaqaan 'Playstation consoles' ee caruurtaada ay ku ciyaaraan, TV-yada saadaasha weyn ee ninku u ciyaaro… iyo xitaa bar fudud oo leh buskudyo iyo kafee bilaash ah.
Haddaba maxay tahay Qiimaha Magaalada in la sameeyo? Hagaag, waxay ku bilaabeen jarista geeska bakhaarka oo ay dib ugu qaabeeyeen daaqado waasac ah si loo arko waxyaabaha ku jira gudaha.
Kadibna waxay hubiyaan in daaqadahaas qaarkood ay wajahayaan Ashley:
Laakiin kii xoogaa iska caabin ah? Oui. Dhab ahaantii waxay iibiyeen dhul ku yaal meesha baabuurta la dhigto oo uu ku fadhiyo dhisme cusub, taas oo DHAMMAAN xayiraysa aragtida Ashley ee waddada weyn.
Cajiib. Hadda taasi waa dagaal tafaariiq ah! Waxaan u maleynayaa inaysan kaftamin markii ay dhahayeen “Goob, Goob, Goob!”. By the way, waxaan u maleynayaa in Ashley's laga yaabo inay wax yar ku xoqday calaamadaas weyn # 1. 🙂
Waxyi: Tom Peters
Goorma ayuu CAN-SPAM isbeddelayaa emaylkii hore?
Wanaagsan kahor iyo kadib sawiro, iyo haa, taasi waa dagaal!